Umurii Maqaa Sadarkaa Gadaa – siifsiin
0-8 Dabballee Barataa(qananii) Guduruu
8-16 Ittimakoo (G.Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal’oo
16-24 Foollee (G.Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee
24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo
32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee
40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo
48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo
56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo
64-72 Luba (yuuba) 3ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo
72-80 Luba (yuuba) 4ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo
80-88 Gadamoojjii Gorsuu (qananii) Dhugoo
Uummatni Oromoo Uummata bal’aa gaanfa Afrikaa keessaa, isa tokko ta’ee baay’inni isaa naannoo miliyoonaa 50 olitti kan tilmaamamuudha. Kanaaf, waa’een uummata Oromoo yoo ka’u, waanti hedduun gara sammuu namaatti dhufuu ni malu. Keessattuu, sirna bulchiinsa dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti qoodni, duudhaalee uummata gurraachaa yoo ka’u sirni Gadaa adda dureen yaadatama.
“waa malee sareen hin duttu” jedhama mitiiree! Anis sababa malee waa’ee sirna Gadaa hin kaasne. Sirni Gadaa jechaafi hima gabaabaan hiikamuu baatus, yaad-rimee isaa muuxannoon hawaasaa keessaa qabu, yaada qorattootaafi maxxaansaalee adda addaa bu’uura godhachuun akka armaan gadiitti dhiyeessuuf yaaleera.
Gadaan duudhaalee maddoota bulchiinsa dimokiraasii addunyaa ta’an keessaa isa angafaa kan uummatni Oromoo bal’aan madisiisee uummata addunyaa si’anaaf akka madda bulchiinsa uummataatti ofii isaaf immoo akka hambaa seenaatti olkaa’uun arjoomedha.Oroomon sirna Gadaa jedhamuun bulaa ture. Yeroo ammaas sirni gadaa bifa duriitiin ta’uu baatuyyuu Oromiyaa keessa bakkeewwan tokko tokkotti ni mul’ata. Sirni Gadaa kunis akka malee bal’aafi icciitii gadi fagoo of keessaa waan qabuuf, jecha yookaan hima tokkoon ibsamuu kan danda’u miti. Haata’u malee, akkuma walii galaatti yaad-rimee sirna Gadaa hundee bulchinsaa, siyaasaa, aadaafi duudhaa, amantii, diinagdeefi hawaasummaa kan of keessatti hammatudha.
Yaad-rimee kanarraa kaasuun sirna Gadaa gabaabsee ibsuuf yoon yaalu, Gadaan sirna bulchiinsaa kan uummanni oromoo waggoota saddet saddeetiin dhalootarraa dhalootatti aangoo wal harkaa ittiin dabarsuudha.sirni aangoo wal harkaa fuudhinsa isaas sirna Baallii yoo jedhamu, qajeelfamoota (principles) sakatta’iinsaafi madaalii (check and balance, through periodic successio of every eight years).qoqqoodaminsa aangoo (division of power, among executive, legislative and judicial branches),wal-morkii madaalawaa miseensota (gareelee)Gadaa shanan gidduutti taasifamuu (competitive parties) fi kkf irratti hundaa’uun raawwatamudha. Gadaan sirna hambaa duudhaalee Afirikaa keessaa tokko ta’ee heera uummanni Oromoo qajeelfamoota armaan olii irratti hundaa’uun ittiin ofiin ofbulchu,daangaa abbaa biyyummaa isaa ittiin kabajatuufi dinagdee isaa eeggatee guddifatudha.
Sirni Gadaa kunis gareelee shaniifi marsaalee saddeet kan ofkeessaa qabudha. Gareeleen Gadaa shananis Birmajjii, Roobalee, Melbaa, Muudana/ Michilleefi Horata yoo ta’an bakka adda addaatti maqaa garaagaraa qabaachuu nidanda’u.
Sirna Gadaa keessatti Oromoon Faana buutuu ykn Dhahaa qaba. Gadaanis kan raawwatamu dhahaa kana hordofeeti. Dhahaan (Faana buutuun) Oromoo Ji’aafi Urjii irratti hundaa’eeti. Guyyoonni Oromoon itti fayyadamu ji’a/baatii tokko keessa jiran hundi maqaa qabu. Maqaawwan kun mataa- mataattii Ayyaana qabu. Guyyaaleen kunis carraa yookaan milkii mataa isaanii qabu. Haaluma kanaan guyyaa gaariifi guyyaa cagginoo qaban jedhamanii adda bahu. Dhahaan yookaan Faana buutuun Orommoo kun Faana buutuu dur dur warri kuush ykn warri Ijiptootaa itti fayyadamaa turaniin wal-dhaala. Itti fufiinsa faana buutuu warra Kuush durii akka ta’etti amanama.
Seenaa, duudhaa, amantiifi ilaalchi, walu- maagalatti aadaan uummata tokkoo wal qabatanii eenyummaa uummata sanaa waan ibsaniif siyaasa fi diinagdee uummata tokkoo guddisuu irratti gahee guddaa qabu. Kanaafuu uummanni Oromoo eenyummaa ofiitiin boonee diinagdee fi siyaasaan akka guddatuuf seenaa, amantii, duudhaa ganamaa; dimshaashumatti ‘aadaa’ mataa isaa kanatti fayyadamuu, kunuunsuufi guddifachuu qaba. Oromoon Oromummaa isaatti amanu Gadaa deebisuu keessatti Qooda qaba. Haaluma kanaan marsaalee sirna Gadaa kana haala walduraa duuba umuriitiin akkaataa armaan gadiitti lafa keenya. As irratti gara yaada gabatee armaan gadiitti osoo hin seeniin waa’ee sirna Gadaa Orommoo gabaabaatti ifaa kan ta’uun irra jiraatu Gadaan uummata Oromoo qabiyyee armaan gadii of keessatti ni qabaata. Kabaja ilaalcha amantii, aadaa, seeraa fi duudhaa Uummata Oromoo boonsuufi bashannansiisu ta’uun isaa beekamaadha. Kanaaf ittiin haa boonnuu, ittiin haa hojjennuun, dhaamsakooti.
Abbaan Alangaa qaama seeraafi dambiilee duudhaa Gadaa Keessatti argaman raawwachiisuuf aangoo guutuu qabudha. Alangaan meeshaa gogaa Roobii irraa hojjetamu fiixeen isaa kallaattii qabatamurraa gara dhumaatti qal’ataa kan deemu ta’ee abbaan Alangaa akka mallattoo beekamtiitti (recognition) kan qabatudha. …….itti fuffaa.
Previous Previous post: Albuuda Qabsoon Boodaa
Next Next post: Ajaa’iba Finfinnee, Harmeedhaaf